Neymar Jr Oo Kooxdiisa PSG U Sheegay In Aanu Paris Ku Soo Laabanayn, Qorshihiisa Xagaagan Iyo Xog Cusub Oo Laga Bixiyay Xaaladiisa. - Gool24.Net
Neymar Jr Oo Kooxdiisa PSG U Sheegay In Aanu Paris Ku Soo Laabanayn, Qorshihiisa Xagaagan Iyo Xog Cusub Oo Laga Bixiyay Xaaladiisa.
Wargayska Sport ee magaalada Barcelona ka soo baxa ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay xaaladii ugu danbaysay ee Neymar Jr iyo kooxdiisa PSG waxaana warbixin khaas ah lagu sheegay in hadda furniin dhamaystirani uu dhex maray Neymar iyo kooxdiisa PSG.
Warbixin dheer oo lagu faah faahiyay xaalada hadda iyo waxa uu Neymar Jr doonayo ayaa lagu daabacay wargayska Sport taas oo lagu iftiimayay sida ay uga go’an tahay in uu xagaagan ka baxo PSG.
Shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo turjuntay warbixinta lagu sharaxay xaalada Neymar Jr iyo kooxdiisa PSG halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
Warbixinta Sport ayaa lagu bilaabay: “Hawlka Neymar horumar ayuu samaynayaa wuxuuna jiray dhawr todobaad. Furniinka u dhexeeya ciyaartoyga iyo PSG waa mid si cadaan ah oo dhamaystiran ah, wuxuuna kooxda ka bixi karaa xagaagan”.
“Xaqiiqdii, Ciyaartoygu waxa uu bishii May sheegay in aanu ku soo laabanayn Paris. Xagaagii hore si la mid ah ayuu sameeyay laakiin PSG ayaan u oglaan in uu baxo, laakiin hadda duruufuhu way ka duwan yihiin”.
“Neymar waxa uu khaatiyaan ka taagan yahay fashilka kooxda ee tartanka Yurub, wuxuuna aaminsan yahay in ay waajib ku tahay in uu La Liga ku soo laabto si uu u sii wato waayihiisa ciyaareed”.
“Barcelona waxay ka war qabtaa dhamaan dhaq dhaqaaqa oo idil, inkasta oo ay si taxadar leh u dhaqmayaan si ay uga dheeraadaan in ay isku dhacaan kooxda reer Paris”.
“Nemar waxa uu ogyahay in uu ku qaldanaa in uu Barca ka baxay. Waxa uu u sameeyay waxay ahayd lacag, laakiin waxa uu sidoo kale doonayay in uu dhiso mashruuc cusub oo uu xidiga ugu muhiimsan u noqdo. Laba sano ayaa ka soo wareegay sawirkuna wuu ka duwan yahay”.
“Kooxdu way fashilantay isla markaana dhaawacyo ayaa isaga sidoo kale ka hayay, Neymar kooxaha ayaa kulan kastaba ugaadhsada waana si ka liidata markii uu Spain joogay”.
“Neymar waxa uu ka soo horjeedaa fikrada ah in uu xili ciyaareed kale ku bilawdo Paris taasna kooxdu way ogtahay. Waxay isku dayeen in ay isaga siiyaan malaayiin heshiis cusboonaysiin ah, laakiin hadda su’aashu lacagta ma taagna”.
“Neymar waxa uu doonayaa koobab muhiim ah iyo in uu garoonka dushiisa farxad ku dareemo, waxaana suurtogal ah in Barcelona oo kaliya ay tahay. Ciyaartoydii ay isku kooxda ahaayeen waxay doonayaan in uu soo laabto, waxa uu isagu doonayaa in uu Messi iyo Luis Suarez markale la ciyaaro, taas ayaa riyadiisa ah, laakiin waxay u talaa PSG”.
“Tababare Thomas Tuchel waxa uu dalbaday in qolka labiska xagaaga la nadiifiyo wuxuuna aaminsan yahay in kooxda ay waajib ku tahay in ay dib isku casriyayso iyada oo ciyaartoyda da’yarta ah ee koobabka u gaajaysan lagu salaynayo”.
“Thomas Tuchel waxa uu khaatiyaan ka taagan yahay xidigaha dhibaatada ku abuuraya isla markaana Neymar waxa uu noqon karaa mid kale haddii uu xili ciyaareedka farxad la’aan ku bilawdo”.
“Hawlgalku waa mid aad u khidad badan isla markaana Barca ay way ogtahay. Xaqiiqda ah in ay PSG xiisaynayso Coutinho ayaa caawin karta wada xaajoodyada, Neymar waxa uu riyo u ahaa Barca, laakiin waxa uu si qun yar, qun yar ah ugu muuqdaa mid in badan xaqiiqo la mid noqonaya”. ayaa warbixinta Sport lagu soo xidhay.
Xogta lagu bixiyay warbixinta wargayska Sport ee aanu idiin soo turjunay ayaa muujinaysa in Barcelona iyo Neymar Jr ay hadda u muuqdaan kuwo isku soo hiloobaya oo ay suurtogal tahay in ay markale wada shaqayn karaan.